KEYDMEDIA - First Modern Somali News & Video Website - Warar - Xiriirka Abu-Mansuur Al-Ameriiki & Sirdoonka Maraykanka! - Exclusive
Xiriirka Abu-Mansuur Al-Ameriiki & Sirdoonka Maraykanka! - Exclusive
Nairobi (KON) - Sidaan horey usoo Qornay waxaa mar kale barta Youtube lasoo dhigay cajilad cusub oo uusoo duubay Cumar Xamami oo ku jila Abu-Mansuur Al-Ameriiki, wuxuna hadalkiisa ku dalbanayaa in amiirka Al-Qaacida Ayman A-Dawaahiri uu ka badbaadiyo khatar uu sheegay inay uga soo fool-leedahay ururka Al-Shabaab.
Qofkii xasuusta muddo 9 bilood ka hor ah ayuu dalabkan oo kale soo jeediyay Al-Ameriiki, waxaana bishii hore ururka Al-Shabaab ay soo saareen bayaan ay ku sheegayaan in Al-Ameriiki uusan ku hadli karin afka "Muhaajiriinta".
Inta aanan sheegin halka uu ku sugan yahay Abu-Mansuur Al-Ameriiki, waxa mudan inaan is waydiino, malooga bartay Al-Shabaab inay muddo intaas le'eg u seeto-dheereeyaan qof ay u arkeen inuu mucaarad ku yahay? Sideese ugu suurto gashay nin gacantooda ku jira oo ay ku tilmaameen inuusan hadli karin, inuu duubo cajilad video ah, kadibna uu helo kombiyuutar iyo internet, markaasna uusoo galiyo bartiisa youtube-ka? Waa su'aalo ay si fudud uga jawaabi karaan dadka si fiican u yaqaana dhaqanka Al-Shabaab, horayna uma dhicin in dulqaad intaas le'eg ay u yeeshaan Al-Shabaab qof ay ka shakiyeen, iska daa qof mucaaraday fikirkoodee.
Hadabe xagee ku sugan yahay Al-Ameriiki? Waxa la wada ogyahay in Maraykanku uu waayihii dambe oo dhan adeegsanayay qaab ku-dhex-milmid ururada uu u arko inay khatar ku yihiin, waxaana horay loogu arkay ururka Al-Shabaab gudihiisa iyo waliba madaxdiisa inay ku jiraan rag sirdoon ah oo la shaqeeya sirdoonada Maraykanka iyo Ingiriiska.
Waxa Maraykanka u suurto gashay inuu si fudud ku dilo saddexdii nin ee Soomaaliya uga dhuuman jirtay muddo dhowr iyo toban sanno ah, kuwaasoo lagu eedeeyay qaraxyadii Safaaradaha Maraykanka ee Nairobi iyo Dar-Salaam. Ragaas oo kala ah Cabadalla Suudaani, Fazul Abdalah iyo Salah Nabhaan, wuxu Maraykanku ku dilay duqaymo iyo shirqoolo laga soo dhex abaabulay gudaha Al-Shabaab.
Waxa intaas dheer dilal qorshaysan iyo xarig loo geystay rag badan oo daacad u ah Al-Shabaab, kuwaasoo ay soo gudbiyeen akhbaartooda rag sarsare oo ka tirsan Al-Shabaab.
Waxaa Soomaaliya laga ogsoon yahay in dilkii Salah Nabhaan oo lagu dilay duleedka magaalada Baraawe ay ka dambeeyeen rag Muhaajiriinta ka tirsan, waxaana la sheegaa nin Muhaajiriinta ka tirsan oo duqeyntii ka dib ay horay u qaadeen diyaaradihii Maraykanku.
Waxa sidoo kale dhamaadkii sanadkii hore soo ifbaxay in dilkii Anwan Al-Cowlaqi oo diyaaradaha is-wada ay ku dileen dalka Yaman uu ka dambeeyay nin Muhaajir ah oo u dhashay dalka Denmark oo hada qirtay kadib markii Maraykanku ay u diideen lacag ay markii hore u balan qaadeen.
Mudo Sanad ka hor ah, waxaa magaalada Muqdisho soo gaaray warar sheegaya in Abu Mansuur Al-Ameriiki ay meel banaan ah ka qaaday diyaarad Maraykanku leeyahay, waxaana jiray warar la isla dhex marayay oo sheegay in Maraykanku ay afduubteen isagoo halkaas maraya, halka wararka qaar ay ku tuhmeen inuu horay ula shaqeyn jiray Sirdoonka Maraykanka hadana uu dhameystay shaqadiisii uuna dib ugu laabtay wadankiisii.
Wax lala yaabo maaha in Maraykanku, uu marba soo bandhigo cajilad hadal ah oo uu soo jeedinayo qof si qarsoodi ah ula shaqeeya, ama qof ay qabsadeen, hadaalkaas oo ay u arkaan inuu dhabar jab ku noqon karo kooxda ay dagaalka kula jiraan.
Waxaanan sugnaaba waa halka uu ku dambeeyo Al-Ameriki oo noqon doonta inay gowracaan Al-Shabaab haddii ay hayaan wali, ama uu dhinac ka dago dhulweynaha dalka Maraykanka isagoo lasiin doono mushaar howlgabnimo oo ay qaataan dadka shaqadooda gutay ee Maraykanka ah.
Wadanka // Keydmedia Online - Xafiiska Nairobi